अमेरिकी सेना भित्र्याउने सम्झौता विरुद्ध उभिए गगन, देउवालाई पारे आछु-आछु ! - Lekh-Patra
अमेरिकी सेना भित्र्याउने सम्झौता विरुद्ध उभिए गगन, देउवालाई पारे आछु-आछु !
काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद् गगन थापाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) का लागि नेपालले सम्झौता गर्न नसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै थापाले कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालै त्यसबारे प्रस्ट पार्नुपर्ने माग गरे ।
थापाले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने बताए। ज्ञवालीलगत्तै बोलेका कांग्रेस सांसद थापाले पनि एसपिपीबारे प्रधानमन्त्रीले आजै संसदमा जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन्।
‘आजै यो बैठकमा आएर प्रधानमन्त्री आफैंले यस्तो प्रकृतिको सम्झौता नेपालले गर्दैन भनेर भन्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘अमेरिका के चाहन्छ उसको कुरा भयो। तर प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो सम्झौता नेपालले गर्दैन भनेर आफ्नै शैलीमा हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन र गर्दैन, गर्दैन, गर्दैन भन्नुपर्छ।’
उनले सञ्चारमाध्यममा १० बुँदाको सहकार्य प्रस्ताव रहेको भन्दै सम्झौता के हो, कसको पालमा सुरु भएको र कहाँँबाट आएको ? भन्दै प्रश्न गरे ।
“सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ– यसको बारेमा हामीले थाहा पाएका छैनौँ । वेबसाइटमा हेर्‍यो भने यो २०१९ मै पूववर्ती सरकारको पालामा आएको रहेछ, पूववर्ती रक्षामन्त्रीहरूले सराकारात्मक भएर अघि बढाएको भन्ने पनि समाचारहरूमा आएको छ । सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो प्रस्ट धारणा यहाँ राख्नुपर्छ,” उनले भने ।
सांसद थापाले एमसीसीजस्तो सम्झौता छिमेकी देशहरूबाट लिने भए पनि सेना सहभागी हुने कुनै पनि कार्यक्रममा नेपाल सहभागी नहुने र हुन नदिइने उल्लेख गरे ।